Leenjiifamtoonni Irbaata Eega Nyaatanii Booda Kukkufanii Haqqisuu Jalqaban:Mooraa Leenjii Polisootaa Kan Sanqallee
Fulbaana 17, 2018
Leenjitoota Institutii leenjii polisii sanqallee (Suuraa faayilii)
Institutii leenjii polisii idilee fi oogumaa oromiyaa mooraa sanqallee keessatti Dilbata Fuulbaana 16 bara 2018 galgala leenjifamtoonni irbaata eega nyaatanii booda dhukkubsachuun isaanii ibsamee jira.
Lakkoofsii isaanii hanga kuma 3 akka ga’u kan ibsamee yoo ta’u gara hospitaalli Riferaal Yunivarsitii Amboo, gara hosptaala walii-galaa Amboo fi hospitaala sadarkaa duraa Gudaritti geeffamuu isaanii beekamee jira.
Hospitaalli Riferaal Yunivarsitii Amboo leennifamtoota hanga kuma lama ta’an wal’anuu isaa kan ibse yoo ta’u mallattoon agarsisaa turan haqqisaa, of-dadhabanii kufuu, dhangala’an qaama isaanii keessaa dhumuu akka ta’e mediikaal daayekteer riferaalii yunvarsitii Amboo Dr. Gonfaa Motii ibsanii jiru.
Sababaan rakkoo kanaa qoratamaa akka jiru fi yeroo qorannaan xumuramuus uummataaf kan ibsamu ta’u dubbatan. Kanneen qubaan lakka’aman amma iyyu hosptaala kan ciisan ta’u fi kan du’e akka hin jirre ibsame ejira.
Achuuma mooraa sanqallee keessa kiliinkii jiruuf ogeessa dawaa kan ta’an saajiin Lataa Dabalii ofii isaanii iyyu Daabboo nyaatanii akka turan garu garaachii isaanii kan isaan dhukkubee ture ta’uus mallattoo biraa hin agarsiifne jedhan.eega Eega irbaata nyaatanii booda haqqisaa fi kukkufaa turan jedhu.
Simannaa WBO Tigraayitti Geggessame
Sirna Simannaa Hoogaansa ABO
Oromoon Karrayyuu bisaan warshaa Mata-Haaraa,Nuuraa Heeraa irraa nutti gorsan,kemikalii fi laga Hawaasiiin lafa dhabuutti jirra jedha
Obomboleettiin Floreens jedhamu Kutaa US, Norz karolaayinaa Dhaqqabee Jira
Gabaasa Wal Falmisiisaa Prezidaant Traamp Baasan
Dargaggoota 3000 ol Finfinnee Keessaa Raayyaa Ittisaatti Dabalamuuf Jiran Jedhameef Sirni Geggeessaa Qophaahe
Yunaayitid Isteets Olompiikii Tookiyoo Dursaa Jirti
Waraanii Yunaayitid Isteete Iraaq Keesaa Bahuuf
Kooriyaan Lamman Waliigaltee Taasisan
Mudamnii Siyaasaa Tunuziyaa Itti Fufeera
Mootummaan Naannoo Somaalee Haleellaa Hidhattootaatiin Namoonni 350 ol Ajjeefaman Jedhe